Umiselwa njani ngetyala oManyanisiweyo- iTyala leShishini leKwakha
Yakha iTyala lakho leNkampani
Isikhokelo esibanzi kwikhredithi yamashishini, ukuseka iprofayili yeshishini lokuthenga ngetyala kunye nokufumana imigca yokuthenga ngetyala kwababolekisi Ukuthenga ngetyala kwishishini akulula ukwenza ngokwakho, kodwa ngoncedo oluncinci ungaba nekhredithi yobumbano kwangoko kunokuba ubucinge. Zininzi izinto zokuphepha kunye nezinto ezininzi ezibalulekileyo ezingenakujongwa. Sikubamba ngesandla kwaye sikukhokele kule nkqubo inzima.
Ukulungiswa kwenkqubo yoKwakha iTyala leNkampani
Sibhala phantsi inkqubo yokuseka iprofayili yeshishini lebhanki, yonke indlela eya kwimali mboleko yebhanki evulekileyo, amakhadi okuthenga ngetyala aliqela kunye nemigca eliqela yokuthenga ngetyala kunye nabathengisi. Konke oku kuqala ngokubeka isiseko sokwenza iprofayili yakho yamatyala kunye nenkqubo yokwenza isicelo nababolekisi, ngokwenza inkuthalo yakho efanelekileyo. Kuya kufuneka uqinisekise ukuba ishishini lakho lilungele inkqubo yokwakhiwa kwetyala- ukuba uqala ngaphandle kokwenza le misebenzi, ubeka emngciphekweni wokuba uqale phantsi okanye ngaphezulu, uphephe umngcipheko obekiweyo wetyala / umngcipheko omkhulu ziarhente zokunika ingxelo. Kubalulekile ukuba uqonde kwaye ugqibezele la manyathelo ukwakha iprofayili yakho yeshishini.
Inyathelo 1 -Igama lokuKhangela kwi-Dunn kunye neBradstreet
Ngokukhangela kwi-D&B yamagama eshishini, unokufumana ngokukhawuleza ukuba ishishini elinegama elifanayo linembali yetyala. Ngokusebenzisa uphando oluphambili, unokubuza umbuzo wedatha ye-D&B kwinqanaba lesizwe. Kutheni le nto ukukhangela u-Dunn noBradstreet kubalulekile? Ukuba ubuzakugqibezela inkqubo yokwakhiwa kweshishini ngetyala kwaye kamva ufumanise ukuba inkampani enegama elifanayo (mhlawumbi ekwimeko eyahlukileyo) ibineprofayili yamatyala ngetyala okanye imbali ephezulu yomngcipheko wekhredithi, unokuzifumana kufuneka woyise oko xa igama lenkampani liyaphandwa.
D & B Igama lokuKhangela
Nje ukuba uqinisekise ukuba igama lakho leshishini lahlukile kwi-D&B, ungaqhubeka nenkqubo yokwakha iprofayili yakho yokuthenga ngetyala. Ukuba ufumanisa inkampani enegama elifanayo, unokucinga ngokuhlaziya iirekhodi zenkampani yakho ukuze yakhe amatyala phantsi kwegama legama elingasasebenziyo.
Inyathelo 2-Igama lokuFumaneka kwegama lokungena
Inyathelo elilandelayo kukujonga igama leqhekeza lakho kuzo zonke izinto ezibhalisiweyo kwisizwe. Unokwenza oku ngokuya kuNobhala-Jikelele welizwe ngalinye okanye iofisi yeKhomishini, iwebhusayithi okanye iziko lonxibelelwano kwaye ujonge ukufumaneka kwegama, okanye ungasebenzisa isixhobo esikwi-Intanethi. Kukho izixhobo zokukhangela ezikhoyo zokugcina iirekhodi kunye nezemali kunye namashishini abhalisiweyo. Olu phendlo lulula luya kukwazisa ukuba likho elinye ishishini elibhalisiweyo elisebenzisa igama elifanayo kwelinye ilizwe.
Ukukhangela kufuneka kuqhutywa ngaphandle kwesazisi esibhanyabhanya, esithetha nje igama lequmrhu ngaphandle kwe- "Inc", "LLC", "limited", "Corp", njl .olu phando, uyakufumana inkampani yakho idwelisiwe kwaye unokujonga ulwazi lwerekhodi yoluntu, njengaxa kwakusekwa iqumrhu, uhlobo kunye nedilesi yequmrhu elibhalisiweyo.
Inyathelo 3-Ukujonga ukwaphulwa komgaqo werhwebo
Uya kufuna kwakhona ukukhangela i-Trademark Electronic Search System (TESS) indawo yokugcina igama lakho. Olu hlobo lombuzo ngokubanzi luza kubonisa iziphumo ezininzi. Into oyifaka kwifom iyahlanjululwa kwaye ihluzwe kumdlalo obanzi. Umzekelo, ukuba ukhangela "iTyala leShishini", uza kubona iziphumo ezinje nge "CU BIZSOURCE" engenalo 'ishishini lokuthenga ngetyala' egameni okanye inkcazo yempahla neenkonzo, nangona kunjalo 'ishishini' kunye 'nekhredithi' zezi, ezizakuhambisa isiphumo, nangaphandle komdlalo ngqo.
Inkqubo yokuKhangela kwi-Intanethi (TESS)
Iimpawu zorhwebo ziya kubhaliswa kwaye nokuba zi-LIV okanye ze-DEAD, kule meko, ufuna ukujonga uphawu lwentengiso bukhoma kunye nomdlalo ochanekileyo wegama lakho leshishini ukuze uqiniseke ukuba akukho kungqubana. Olunye uqwalaselo kukuba uphawu lwentengiso lubelwe iindidi, ukuze ube unophawu lwamagama olubhaliselwe ishishini lakho okanye icandelo kwaye elinye iqumrhu lingabhalisa ukulandelelana kwamagama kwelinye icandelo kwelinye iinjongo.
Inyathelo 4-UkuKhangela kwegama Domain, Idilesi yeWebhusayithi
Kuya kufuneka ubhalise igama lenkampani yakho njengeziko ledatha, ngokukhethayo ngolwandiso lwe ".com". Jonga nayiphi na umboneleli wesizinda sokufumaneka kwegama lesizinda. Igama lakho le-domain linokuthi okanye lingabandakanyi isazisi sakho seqela. Oko kuthetha ukuba ukuba igama lenkampani yakho "ngabaphathi beProjekthi abaPhambili, uya kuthi ubhalise ku" www.bestprojectmanagercorp.com "okanye kungenjalo"
Bhalisa.com Ukuhlolwa kwesikhundla sokuKhangela
Oku akufuneki ukuba ibe ligama eliyintloko lenkampani eliyisebenzisela inkampani yakho ishishini. Ukulandela lo mzekelo ungentla, usenokuba usebenzisa elinye igama lesizinda, nangona kunjalo kubalulekile ukuba igama elizokwakha ityala libhaliswe kuwe.
Inyathelo 5-Uluhlu lweSuppplu uLuhlu
Qinisekisa ukuba unoluhlu lweshishini kwisikhokelo seshishini leSupppages. Ukuba awukwenzi, unokuyenza yasimahla. Oku kuthatha nje imizuzu kwaye akubizi mali. Unokwenza i-akhawunti kwaye ungeze ishishini lakho kwisalathiso ngokulandela ikhonkco elingezantsi. Ukuba ufumanisa ishishini lakho, jonga ukuqinisekisa ukuba ulwazi luhlaziywa kunxibelelwano lwakho lwangoku kunye neenkcukacha zendawo.
Uluhlu lweeShishini zeSpanish eziPhezulu
Kukho ukhetho oluninzi kwishishini lakho ukuba lidweliswe, ngenxa yesi sizathu, ukuba negama lakho lishishini kwisalathiso ngolwazi lwakho lwangoku lokungena lwanele.
Igama Isisombululo sembambano
Ukuba igama leqhekeza lakho liyangqubana noluphi na olu hlaselo lungasentla, kuya kufuneka ucinge ukultshintsha. Kukho iindlela ezininzi onokukhetha kuzo, ezivela kwi-DBA's, amanqaku okulungiswa kunye nokufayilisha kwebhizinisi elitsha. Ungatsalela umnxeba i-1-800-Inkampani kwaye ucele umlingane wentengiso ukuba akuncede ngegama elitsha lequmrhu. Ngaphambi kokuba ugcwalise utshintsho lwegama leshishini okanye ubhalise ishishini elitsha, kuya kufuneka ugcwalise la manyathelo angentla uqinisekisa ukuba ungakha ngokukhuselekileyo iprofayili yeshishini lakho malunga nalo.
Qhubeka kwiNyathelo elilandelayo kwi >> Ityala leZiko eliHlanganisiweyo- Ukuxoxa ngeentlobo zeShishini >>
Ukufunyanwa kwamatyala kwishishini
Amaziko etyala kunye neMibutho yamaShishini
IziBonelelo zeKhredithi eziHlanganisiweyo
Ii-FAQ zeMali eQokelelweyo
Iinkqubo zamatyala eziManyeneyo
Amanqaku oQokelelo lwetyala
Imeko yeZiko eliHlanganisiweyo
Iprofayile kaDun kunye neBradstreet
Iprofayile yetyala ye-Equifax
Ukusekwa kweZiko eliManyanisiweyo leShishini lakho
Isazisi sakho seKhadi leShishini